Mareykanka waxay abaal-marin u bixinaysaa macluumaadka u horseeda soo qabashada dadka la soo sheego in ay argaggaxiso yihiin. Haddii aad hayso macluumaad inaga caawin kara, fadlan talo-siintaada hadda soo gudbi.
(Qoraal Buuxa »)
Faragalinta Shisheeye ee Doorashada
Barnaamijka Abaalmarinta Caddaalada ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa waxey soo bandhigeesaa abaalmarin gaaraysa illaa $10 Milyan qofkii war ka keeno ogaanshaha ama meesha uu ku suganyahay shaqsi walba oo matalaaya ama ka amar qaadanaaya dowlad shisheeye kaaso faragalinaya doorasho heer fadaraal, gobol ama dowladda hoose asagoo ku xad gudbaaya sharciga qeebtiisa 1030 ee ciwaankiisu yahay 18. Dhagarqabayaal khaas ah ee xagga aaladda intarneetka oo beegsanaayo doorashooyinka amba isudabaridka olo’laha, waxey sidoo kale jabinaayaan Sharciga Been-abuurka iyo Xadgudubka Kombiyuutarkaee, 18 U.S.C. § 1030, taasoo dambi ka dhigaysa galista aan la oggolayn ee kombuyuutarka iyo qaababka kale ee been-abuurka ee la xiriira kombuyuutarka. Dambiyada kale, sharcigu wuxuu diidayaa inaad iyadoon laguu oggolaan iska gasho kombuyuutarada si aad uga heshid macluumaad ogolaansho la’aan adigoo u sii gudbineesid dad aan loogu talogalin
14-kii Abriil, 1988, gaari bam siday ayaa ku hore qarxay Naadiga USO (USO Club) ee ku yiil, Naples, Italy. Waxaa qaraxa ku dhinteen shan qofood, oo ay ku jirtay haweeney ka tirsanayd shaqaalaha ciidanka Mareykanka, waxaana ku dhaawacmeen 15 qofood, oo afar ay ahaayeen shaqaalaha ciidanka Mareykanka. Junzo Okudaira, oo ka tirsanaa kooxda argagixisada Ciidanka Cas ee Jabaan (Japanese Red Army – JRA), waxaa lagu xukumay dalka Mareykanka markii ay taariikhdu ahayd 9-kii Abriil, 1993 iyadoo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay qaraxii bamka ee ka dhacay magaalada Naples. Okudaira waxaa kaloo lagu tuhmayey in uu ku lug lahaa qarax baabuur iyo madfac lagu weerary Safaaradda Mareykanka ee magaalada Rome. (Qoraal Buuxa »)
Afduubka Mark Randall Frerichs
Kabul, Afghanistan | Fabraayo 2020
Mark Frerichs waxaa la afduubay horaanti bishi Fabraayo ee 2020. Waqtigii la afduubaaye, waxuu daganaa Kabul. Wuxuu ku wareege Afqaanistaan qiyaasti 2010 wuxuuna kashaqeynaaye mashruucyo dhismo oo kasocde gabi ahaanba waddanka.
Frerichs waa nin caddaan ah, oo dhiirargiisu yahay 180 santimitir waxuuna miizaankiisu yahay 86 Kiilo. Waxuu leeyahay timo boor qafiif ah oo soo bidaareesanaayaan wuuna xiirnaan karaa, indhihiisa waa boor cassaan xiga, waxuuna dhaawac horaan ah kuleeyahay daankiisa bidix. Marki ugu dambeyse ee la arko, wuxuu xidhnaaa buud madow, surwaal cagaar ah, jaakad cagaar ah iyo masar qalin ah.
Afduubka Paul Edwin Overby, Jr.
Khost City Afghanistan | Maayo 2014
Kalabarihi bisha Maayo ee 2014, Paul Edwin Overby, Jr., qoraa Mareekan ah, ayaa laguwaaye gobolka Khost ee Afqaanistaan halkaasoo cilmi baadhis buug uu qudhiisu qoraaye uu oogu jooge. Intaan lawaayin kahor, Overby wuxuu hindisaaye inuu qorsheeyo inuu ugudbo xuduudka Baakistaan si u udheereeyo cilmi baadhistiisa.
Frerichs waa nin caddaan ah, oo dhiirargiisu yahay 175 santimitir waxuuna miizaankiisu yahay 77 Kiilo. Waxuu leeyahay timo cad oo xiirnaan karaan iyo indho boor cassaan xiga. Overby waxuu la xanuunsanyahay xanuun kanaalka dhagta gudaheeda ah taaso u baahan latacaal iyo daaweyn. Marki oogu dambeese waxaa lagu arkay gobolka Khost ee Afqaanistaan, kala badhki bishi Maayo ee 2014 asagoo sameynaayo cilmi baadhis ku aadan buugga cusub uu qudhiisu qoraaye.
Amiir Maxamed Saciid Cabdal-Raxman al-Mawla
Al-Mawla, oo sidoo kale loo yaqaano Xaaji Cabdalla, waa hogaamiyaha guud ee ISIS. Wuxuu ahaa hogaamiye argaggixiso sare ee ISIS, al-Qaacida ee Ciraaq (AQI), oo wuxuu si isdaba joog ah gaaray ama qabtay door hogaamiye sare ee sida darajada hogaamiye ku xigeen ee kooxda ISIS.
Maaddaama uu yahay mid ka mid ah fikradaha ugu sareeya ee ka dambeeya ee ISIS, al-Mawla wuxuu gacan ka gaystay socodsiinta iyo qiilo u yeelka afduubka, gawraca, iyo ka ganacsiga dadka laga tirada badan yahay ee Yazidi ee waqooyi-galbeed ee dalka Ciraaq oo sidoo kale waxaa la rumeysan yahay inuu yahay qofka kor kala socda hawlgallada argaggixiso ee kooxda ay dunida ka fuliso.
Sacad bin Atef al-Cawlaaki
Abaalmarin Gaaraya Illaa $6 Milyan
Abaal-marinta Caddaalada ayaa ku yaboohaysa inay bixiso illaa $6 milyan oo ay siinayso qofkii keena wax macluumaad ah oo u horseeda in la oggaado shaqsiga ama goobta uu ku sugan yahay Sacad bin Atef al-Cawlaaki. Al-Cawlaaki waa amiirka AQAP ee Shabwah, waa gobol ku yaal dalka Yaman. Wuxuu si cad ugu dhawaaqay weerarada ka dhanka ah Mareykanka iyo xulafadeena.
Ibraahim Axmed Maxamuud al-Qosi
Abaalmarin Gaaraysa Illaa $4 Milyan
Abaal-marinta Caddaalada ayaa ku yaboohaysa inay bixiso illaa $4 milyan oo ay siinayso qofkii keena wax macluumaad ah oo u horseeda in la oggaado shaqsiga ama goobta uu ku sugan yahay Ibraahim Axmed Maxamuud al-Qosi. Al-Qosi waa qayb ka mid ah kooxda hoggaanka u ah ee caawisa “amiirka” haatan ee AQAP. Ilaa sanadkii 2015, wuxuu ka soo muuqday muuqaallada AQAP ee ay dadka ku qoroto oo wuxuuna dhiirigeliyay weerarada qofka kaligii geysta ee lidka ku ah Mareykanka ee dacaayadda tooska ee qatka internetka lagu faafiyo. Wuxuu AQAP ku biiray sanadkii 2014, laakiin wuxuu muddo sanado ah si firfircoonaa uga mid ahaa ururka al-Qaacida oo wuxuuna sanado badan si toos ah ula shaqeyn jiray Usama bin Laden. Al-Qosi Bakistaan ayaa waxaa lagu qabtay bishii Diseembar 2001 ka hor inta aan loo soo gudbin Guantanamo Bay. Wuxuu qirtay dambi sanadkii 2010 wuxuu ka hor qirtay gudi militari in uu shirqoolka laqaatay al-Qaacida oo uu taageero maadi ah siinayay argagixisada. Al-Qosi Mareykanka ayaa sii daayay oo waxaa lagu celiyay dalka Suudaan sanadkii 2012 iyadoo la raacayay heshiis maxkamadeed.
Waayitaanka Robert A. Levinson
Jasiiradda Kiish, Iiran | 9ka Maarso, 2007
Abaal-marinta Caddaalada (Rewards for Justice) waxay ku yaboohaysaa lacag abaal-marin ah oo gaaraysa illaa $20,000,000 oo ay siinayso qofkii keena xog horeyseedi karta goobta uu joogo, in la soo helo, iyo la soo celiyo Robert A. Levinson. Waa hubaal in qofka xogta keena aan la shaacinayn, oo xitaa waxaa dhici karta in qofka soo sheega inuu helo dib u dejin la siiyo. Haddii aad hayso macluumaad, fadlan la xiriir safaaradda Mareykanka ee kuugu dhow ama qunsulka, FBI da, ama iimeel ku soo dir cinwaankan [email protected]
Faaruq al-Suri waa hogaamiyaha ururka argagixisada ee Hurras al-Din (HAD). Al-Suri waa xubin ka tirsan askarta howl-gabka ee al-Qa’ida (AQ), isagoo muddo tobaneeyo sano ah ka tirsannaa ururka argagixisada. Wuxuu ahaa tababbare sare oo ka tirsanaa ciidamada ka hortagga AQ hoggaanka sare ee Sayf al-Adl Afghanistan ee sanaddadii 1990-yadii, oo wuxuuna tababbaray dagaalyahannada AQ ee Ciraaq laga soo bilaabo 2003 ilaa 2005. Hadda ka hor Al-Suri waxaa lagu haystay dalka Lubnaan intii u dhaxeysay 2009 ilaa 2013, oo ka dibna wuxuu noqday abbaanduulaha ciidanka ee Jabhadda Al-Nusrah. Wuxuu Jabhadda al-Nusrah ka baxay 2016.
10 ka bishii Seteember 2019, Waaxda Arrimaha Dibadda waxay al-Suri u magacawday inay yihiin urur Argaggixiso Gaar ah oo Caalami ah sida hoos timaada Amarka Go’aal meel-marinta ee 13224.
Abu ‘Cabd al-Karim al-Masri
Abu ‘Cabd al-Karim al-Masri waa xubin askarta howl-gabka oo ka tirsan ururka al-Qa’ida (AQ) iyo waa hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka Hurras al-Din (HAD). Sanadkii 2018, al-Masri, wuxuu xubin ka ahaa shuurada HAD, waa kooxda waaxda sare ee go’aan gaarista ee kooxda u qaabilsan, wuxuuna hayay xilka sida dhexdhexaadiye u dhexeeyay ururka iyo al-Jabhadda Nusrah.
Hurras al-Din waa koox xiriir la leh ururka al-Qaacida oo ka soo ifbaxday wadanka Suuriya horaantii sanadkii 2018 kadib markii dhowr urur ay ka soo goosteen ama ay kala jajabeen ururka Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Hogaanka HAD, oo uu ku jiro al-Masri wali wuxuu daacad u yahay ururka AQ iyo hogamiyahooda, Ayman al-Zawahiri.
Weerrardii Mumbai ee 2008
Mumbai,Hindiya | 26-29 Nofembar, 2008
Laga soo bilaabo 26ka Nofembar, 2008, illaa 29kii Nofembar, 2008, 10 qof oo weerarayaal ah oo ay tababar ku qaatay ururka argagixisada ee ajnabiga ah ee Pakistan oo lagu magacaabo Lashkar-e-Tayyiba (LeT) ayaa weerarro isdaba joog ah oo lala beegsaday meelo badan oo Mumbai, Hindiya, oo ay ku jiraan hotelka Taj Mahal, hoteelka Oberoi, Café Leopold, Guriga Nariman (Chabad) iyo saldhigga tareenka Chhatarapati Shivaji Terminus, kaas oo dilaa qiyaastii 170 qof.
Lix Maraykan ah ayaa lagu dilay intii lagu jiray weerarka saddexda maalmood ah: Ben Zion Chroman, Gavriel Holtzberg, Sandeep Jeswani, Alan Scherr, gabadhiisa Naomi Scherr, iyo Aryeh Leibish Teitelbaum.
Bishii Oktoobar 2017 dhexdeeda, Salih Al-Aruri, oo ah mid ka mid ah Guutada Izzedine al-Qassam Brigades, waa garabka militeriga Xamaas, ayaa waxaa loo doortay inuu noqdo hoggaamiye ku xigeenka Xafiiska Siyaasadda Xamaas. Al-Aruri wuxuu maal-geliyaa oo uu amraa howlaha militeriga Xamaas oo ay ka wado Galbeedka West Bank oo waxaa lala xiriirinnayaa inuu geystay weerraro argagaxiso oo dhowr ah, afduub, iyo qafaalasho. Sanadkii 2014 dhexdeeda, al-Aruri wuxuu ku dhawaaqay in Xamaas ay ka mas’uul tahay weerarkii dhacay 12ka bisha Juun, 2014 oo lagu afduubbay oo laguna dilay seddex dhallinyaro oo Israaiili ah ee ku sugnaa Galbeedka West Bank, oo ay ku jiro qof isla haystay dhalashada Mareykanka iyo Israaiili oo la yiraahdo Naftali Fraenkel. Si waadax ah ayuu u ammaanay in dilka uu yahay sida “howl halyeennimo” inuu ahaa. Bishii Seteember 2015 dhexdeeda, Waaxda Hanti-dhowrka Mareynaka waxay u idmatay in al-Aruri uu yahay Argaggixiso Caalami oo Gaar ah [Specially Designated Global Terrorist (SDGT)] sida uu qabo Amarrada Dowliga ee 13224, amar sababaya in cuno-qabatayn lagu soo rogo hantidisa maaliyadeed.
Khalil Yusif Harb waa la taliye aad ugu dhow Xoghayaha Guud Hassan Nasrallah, hoggaanka kooxda argagaxisada Hizballah ee Lebaniis, oo sidoo kale wuxuu noqday isku-xiraha militeriga kooxda oo wuxuu u ahaa ururrada argagaxisada ee Iiraaniyiinta iyo Falastiiniyiinta. Harb wuxuu xukumayay oo uu horjooge uu ahaa howlaha militeri ee ururka ee ka howlgalayay dhulka Falastiiniyiinta iyo waddamo dhowr ah oo ku baahsan Barriga Dhexe. Tan iyo sanadkii 2012, Harb wuxuu kaalin lu la’haa dhaqdhaqaaqa caddad badan oo lacag ah ee xulufada Hizballah ee siyaasadda ee Yemen. Bishii Agoosto 2013, Waaxda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa Harb waxay u magawday inuu yahay Argagaxiso Caalami ah sida uu qabo Amarrada Dowliga ee 13224.
Haytham ‘Ali Tabataba’i waa hoggaanka ugu muhiimsan ee militeriga Hizballah oo hoggaaminayay ciidamadda gaarka ah ee Suuriya iyo Yemen. Ficillada Tabataba’i ee Suuriya iyo Yemen dhexdeeda waxay qayb ka yihiin dadaalka wayn ee Hizballah ay ugu jirto inay fidiso taageero tabbar, qalab, iyo ciidanba si ay u carqaladdayso dhaqdhaqaaqa gobolka ka socda. Bishii Agoosto 2016, Waaxda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa Tabataba’i waxay u idmatay inuu yahay Argaggaxiso Caalami ah sida uu qabo Amarrada Dowliga ee 13224.
Wuxuu ahaa gaashaanle sare ka ahaa Ciidanka Gaarka ah ee Masar ilaa laga soo xiro ee sanadkii 1987 isaga ilaa ku dhowaad kumanaan kun oo ah xoogaga dowladda ku kacsan ka dib marka uu dhacay isku day la isku day in dil loo geysto wasiirka arrimaha gudaha ee Masar (Qoraal Buuxa »)
Mangal Bagh waa hoggaamiyaha Lashkar-e-Islam, waa urur xag-jir oo xiriir la leh kooxda Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Kooxdiisu waxaa lacag ka soo gala ka ganacsiga. soo gelinta muqaadaraadka, afduubka, weerarka kolonyada ciidamada NATO, iyo canshuur ay ka qaataan ganacsiga u dhaxeeya Pakistan iyo Afghanistan.
Bagh wuxuu kooxda Lashkar-e-Islam hoggaamiye uu u ahaa tan ilaa sanadkii 2006 oo si caadi ah uu ugu wareegey inuu la xulufoowo oo ay ilaaliyaan dakhliga ku soo qolqolao iyaga oo isla markaana dardargelinnaya dariiqada xagjirka ah ee Deobandi Islam ee ka jira bariga Afghanistan iyo waqooyiga Pakistan ee uu isaga kontoroolo, gaar ahaan Gobolka Nangarhar Province, Afghanistan.
Taariikhdu markay ahayd 18ka bisha Maarso, 2012, Shrum, oo ay da’diisu ahayd 29, waa la toogtay oo la dilay isagoo shaqadiisa ku sii socda ee magaalada Taizz, Yemen, waxaa dilay qof qori ku hubbaysnaa oo mooto gadaal ka saarnaa isagoo gaarigiisa wada saaran dhinac dhigtay qofka mootada saarnaa. Xilligii la dilayay, Shrum wuxuu ka shaqayn jiray Xarunta Horumarinta iyo Tabbabarka Caalamiga [International Training and Development Center] isagoo maamule iyo macallin maadada Ingiriiska dhiga ka ahaa. Wuxuu markaas isaga iyo xaaskiisa iyo labadiisa carruur ay ku noolaayeen wadanka Yemen. Dhowr maalmood weerarka ka dib, ururka argaggixisada ee al-Qaidada jooga Arabian Peninsula (AQAP) ayaa mas’uuliyadda dilkaas sheegtay. Barnaamijka Abaal-marinta Caddaalada [Reward for Justice] waxay ku yaboohaysaa in abaal-marin ahaan ay ku bixinayso lacag gaaraysa ilaa $5 milyan oo doolar oo ay siinayso cidii keenta macluumaad u horseeda in la so qabto ama maxkamad lagu saaro qofkii geystay, qorsheeyay inuu geysto, ama gacan ka gaystay dilkii muwadinniintii Ameerikaanta ahaa ee lagu magacaabi jiray Joel Shrum. (Qoraal Buuxa »)
Talo-siinta Sababta Ku Xukunka Dambi ee Ramzi Ahmed Yousef
Ramzi Ahmed Yousef wuxuu ahaa qofkii ka mas’uulka ahaa qaraxii bamka ka dhacay Xarunta Ganacsiga Dunida ee magaalada New York bishii Feebaraayo 1993-kii kaasoo ay ku dhinteen lix qofood ayna ku dhaawacmeen dhowr iyo kumanaan qof. Yousef iyo kalkaaliyeyaashiisi waxay gaari weyn oo faan ah oo ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa la galeen Xarunta Ganacsiga Dunida. Dhowr saacadood gudahood, wuxuu Yousef ku baxsaday dayuurad ku socotay Pakistan.
Wuxuu markale Yousef ka soo baxay dalka Philippines halkaasoo uu ku hawlanaa shirqool argagixiso oo culus. Wuxuu Yousef qorsheeyay in la dilo Baabaha John Paul II markii… (Qoraal Buuxa »)
Shakhsiyaadka Ay Aad u Doonayaan FBI-da